AMISOM: Howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab wuu billowday. - Wargeyska Faafiye
Howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegay inay billowdeen howlgallo ay wadajir u fulinayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, kuwaas oo kooxda Al-Shabaab loogala wareegay magalooyin muhiim ah oo ka tirsan gobollada Bay, Bakool iyo Gedo.
War-saxaafadeedka ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM dib ula wareegeen gacan ku haynta magaalooyinka Rabdhuurre, Yeed, Xudur, Waajid iyo Buurdhuubo iyo deegaanno kale.
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Danjire Mahamat Saleh Annadif ayaa u mahadceliyey shacabka Soomaalida ee ku nool magaalooyinka laga qabsaday maleeshiyada, kuwaas oo iskaashi iyo taageeraba u muujiyey ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Danjire Annadif ayaa ugu baaqay mar kale dhallinyarada ka tirsan Al-Shabaab in ay hubka dhigaan, kuna soo biiraan shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaannada ay maamusho dowlada, isagoona sheegay in la soo dhoweyn doono.
Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa dhaq-dhaqaaqyo miletari oo ay ku doonayaan dib ula wareegista deegaannada ay Al-Shabaab ku sugan tahay ka wada gobollada ay wax ka joogaan maleeshiyada.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsRa’iisul Wasaare Abdiweli oo Roma kula kulmay wasiirka arimaha dibada ee TalyanigaUN-Nuclear officials meet Iranian leadersJeddah suicide bomber was Pakistani.7 Qof oo ku Dhimatay Dagaalka Beledweyne.Police: Woman Shot Outside South Mpls. School.